Pejy fandokoana momba ny lalamby, ny lamasinina ary ny mpamono setroka
Pejy fandokoana ny lalamby
Ny ankizilahy amin'ny sokajin-taona rehetra indrindra dia gaga amin'ny fiara sy izay rehetra mandeha amin'ny "hum-hum". Ary mazava ho azy izay rehetra mifandraika amin'ny fialantsasatra sy fitsangatsanganana dia mahafinaritra be.
Boky fandokoana ny lalamby sy ny lokomotiva
Antony ampy ahafahanay manolotra ny sokajy lalamby manokana. Ny fanindriana ny rohy dia manokatra ny pejy misy azy avy Pejy fandokoana. ​
Fiaran-dalamby amin'ny gara
Teny lakile fanampiny: lokomotera etona, lamasinina, lamasinina, lalamby, Lok, Loks, Lokomotiven
Lalam-by fandefasana entana
Pejy fandokoana ankizy kely - lalamby
Pejy misy setroka eo an-toerana | Fiaran'ny lalamby
Lalam-by fandokoana pejy